Horjoogihii kooxda Al-Shabaab ee Gobolka Shabeelaha Hoose iyo ilaaladiisa oo isku soo dhiibay Ciidanka Xooga – Walaal24 Newss
Horjooge sare oo ka tirsanaa kooxda Alshabaab iyo ilaaladiisa gaarka ahaa ayaa isu soo dhiibay Ciidammada Xoogga Dalka soomaaliyeed, gaar ahaan Guutada 14-ka Oktoober ee ka howl-gasha gobolka Shabeellada hoose.
Ibraahim Maxamed Bitow, oo ahaa horjooge ka tirsanaa kooxda Alshabaab ee Gobolka Shabeellada Hoose, ayaa sheegay inuu go’aansaday inuu ka soo tago Alshabaab, ka dib markii uu garowsaday inay gaar marsan yihiin Xaqa iyo Islaamnimada ayna xasuuqayaan shacabka Soomaaliyeed.
“Waxaan hoggaaminayay maleeshiyaad tiraradoodku ka badan tahay 100, oo dagaallo badan la galay ciidanka Dowladda, waxaana naloo geystay jab aad u xooggan” ayuu yiri Bittow, horjoogihii kooxda Alshabaab ee gobolka Shabellada Hoose.
Bitow oo sheegay in uu ka tirsanaa Alshabaab 9-kii sano ee la soo dhaafay ayaa tilmaamay in kooxdu sii liiceyso, ayna la kulmeyso guul darrooyin is daba joog ah.
Horjoogahan ka soo goostay Alshabaab, ayaa dowladda Soomaaliyeed uga mahad celiyay soo dhoweynta wanaagsan, waxa uuna ugu baaqay dhallinyarada u dagaallanta ee kooxda Shabaab in ay ka soo tagaan maleeshiyadan oo uu sheegay in ay baal marsan tahay Islaamnimada.
Bitow ayaa cafis weydiistay Shacabka iyo Dowladda Soomaaliyeed, waxa uuna codsaday in lagu garab siiyo sidii uu qeyb uga noqon lahaa la dagaallanka Al-Shabaab oo uu tilmaamay in ay yihiin cadow naxariis daran.
“Waxaan dowladda ka codsanayaa inay ii kaashato la dagaallanka Al-Shabaab, oo aan si fiican u isu naqaan, si dhibkooda ummadda looga dulqaado” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Ibraahim Maxamed oo ahaa horjoogihii maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose.
Dhinaca kale Aadan Geeddi oo loo yaqaanno Aadan Dheere oo ahaa darawalka Ibraahim Bitow, ayaa sheegay in Al-Shabaab ay duufsadeen isagoo 11 jir ah, ayna ka faa’iideysteen carruurnimadiisa.
Ibraaahim Maxamed iyo Aadan Dheere, ayaa tilmaamay in ay jiraan boqollaal maleeshiyada Al-Shabaab ah oo ay ka go’an tahay in ay isaga soo tagaan kooxdan argagixisada, waxa ayna dowladda ugu baaqeen in ay dhallinyaradaas ku caawiso sidii ay isu soo dhiibi lahaayeen.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa gaaray Dalka Singapore
Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo xilkii laga qaaday Gudoomiye cusub loo magacaabay
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo ku baaqay in wadoyinka lafuro shacabkana ay lashaqeyaan Amniga